Kulan looga hadlayo Waxbarashada haweenka oo ka dhacay magaalada Buuhoodle (Sawiro) – Radio Daljir
Kulan looga hadlayo Waxbarashada haweenka oo ka dhacay magaalada Buuhoodle (Sawiro)
Nofeembar 17, 2012 3:11 b 0
Buuhoodle Nov, 17-2012, Kulankan oo looga hadlayey kor u qaadista Waxbarashadda gabdhaha ayaa waxaa kasoo qayb galay maaamulka degmada Buuhoodle, maamulka ?waxbarashada gobolka Cayn, maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee gobolka Cayn , haween, dhalinyaro, arday , bahda Saxaafadda ?iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle.
Shirkani Waxaa soo qaban qaabisay Waaxda Tacliinta haweenka ee wasaarada Waxbarashada Puntland iyadoo ujeedaduna ahayd sidii bulshada loogu wacyi gelin lahaa waxbarashada hablaha oo muhiim ah.
Ugu horayn shirka waxaa lagu furay ayaado quraan ah intaasi kadibna waxaa madasha ka hadlay Isuduwaha Wasaarada Waxbarashada ee gobolka Cayn C/kariin Maxamed Cilmi oo warbixin kooban ka bixiyey ?Shirkani iyo ujeedada laga lee yahay, isagoo tilmaamay in shirkan looga hadlayo kor u qaadista Waxbarashada Gabdhaha.
Faadumo Shugri oo ah Madaxa Waaxda Waxbarashada gabdhaha ee Wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa iyaduna ka hadlashay madashaasi iyadoo ka warbixisay safarkeeda Buuhoodle iyo waxbarashada haweenka.
Aamina Axmed Maxamed ?oo madaxa waxbarashada dadban ee gobolka CAYN Ayaa ?hadal dheer oo ay madasha ka jeedisey si weyn ugu dhaliishay Wasaarada Waxbarashada oo ay sheegtay inaysan waxba u ka qaban baahiyo badan oo kajira waxbarashada Dadban ee gobolka Cayn.
Intaasi kadib waxaa hadalka isaga danbeeyey hooyooyin, macalimiin suugaan yahano iyo masuuliyiin madasha kasoo qayb galay iyadoo ugu danbayna uu shirka soo xidhay Duqa Degmada Buuhoodle ee maamulka Puntland Cumar X Cabdi.
Shirkani looga hadlayey horumarinta Waxbarashada hablaha ee gobolka Cayn ayaa noqonaya kii u horeeyey oo noociisa ah oo lagu qabto Buuhoodle waxaana kasoo qaybgalayaashii shirku dhamaantood isku raaceen in laga wada shaqeeyo horumarinta & kor u qaadista Waxbrashada gabdhaha.